မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖျ groove စည်ချည်ခင် Cone Winder / အကွေ့အကောက်များသောစက် / Bobbin Winder စက် - တရုတ်အမြင့်မြန်နှုန်းဖျ groove စည်ချည်ခင် Cone Winder / အကွေ့အကောက်များသောစက် / Bobbin Winder စက်ပေးသွင်း,စက်ရုံ -FEIHU
သင်ဒီမှာပါ : နေအိမ် >ကုန်ပစ္စည်း >ချည်ခင်အကွေ့အကောက်များသော machine >စက်အကွေ့အကောက်များသော soft gooved စည်ကြိုး
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖျ groove စည်ချည်ခင် Cone Winder / အကွေ့အကောက်များသောစက် / Bobbin Winder စက်
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းနေရာမှာလည်းအကွေ့အကောက်များသောစက်, ကတိုက်ရိုက် Cone မှကန်တော့ချွန်သုံးပြီးပြန်ရစ်သို့မဟုတ်ကြိုးပြန်ရစ်ဆေးဆိုးပြီးနောက်ကြိုးအတှကျအဓိကအားင်, Fiber မျှင်များကဲ့သို့အကွေ့အကောက်များသောများအတွက်ဝတ်စုံ, ချည်မျှင်, FDY, polyester မျှင်နှင့်စသည်တို့ကို, ထိုသို့ Conical Cone သို့မဟုတ် Tube bobbins အတူတက်ယူနိုင်ပါသည်. ဒါဟာအမြင့်စွမ်းရည်၏အင်္ဂါရပ်ရှိပြီးကောင်းစွာယူ-up, ချောပုံသဏ္ဍာန်, လာမယ့်အပြောင်းအလဲနဲ့အလုပျအတှကျအလုပျသမားမြား၏ပြင်းထန်မှုသက်သာစေနိုင်ကြောင်းနိုင်ပါတယ်.
စက်အကွေ့အကောက်များသော Cone ချည်ခင်စေရန် soft ဆေးဆိုး Cone
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖျဆေးဆိုး Cone စေရန် Cone စက်အကွေ့အကောက်များသော—— ဒါဟာဝါဂွမ်းချည်အဘို့သင့်လျော်သည်, သိုးမွှေးကြိုး, polyester ကြိုး,စသည်တို့ကို. ၎င်း၏ function ကိုယူ-up, .High မြန်နှုန်းကြိုးကန်တော့ချွန်ဆေးဆိုး၏ပြင်ဆင်မှုအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောကြိုးကန်တော့ချွန်လေရန်ဖြစ်ပါသည်: 300-800မီတာ / မိနစ်. လည်း, တစ်ဦးချင်းစီထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ panel ကများနှင့်မီတာ counter.We အမြဲသုတေသနနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်နှင့်ယခုကြိုးပေါ်မှာအမျိုးသားရေးမူပိုင်ခွင့်ရှိနေကြသည် အကွေ့အကောက်များသောစက်(ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ပေါ် sticked အဆိုပါမူပိုင်တံဆိပ်).
တစ်ခုချင်းစီဗိုင်းလိပ်တံဆန့်ကျင်ခက်-Edge ၏စနစ်များရှိပြီးအီလက်ထရောနစ် Anti-ထပ်.
Bobbin ပုံစံ: 5"(170မီလီမီတာ) နိုင် ဖြစ် စိတ်ကြိုက်
စီမန်ကိန်း single-ခြမ်း, နိုင် ဖြစ် 84/108ဗိုင်းလိပ်တံ
စွမ်းအား ပေးသွင်း 380V ကို / 220V 50/60Hz သုံး အဆင့် / လူပျို အဆင့်
မောင်းနှင်မှု တိုင်း ဗိုင်းလိပ်တံ နှုန်း စက်
စွမ်းအား Comsumption 0.09KW / ဗိုင်းလိပ်တံ
ဖယ်ပစ်သည် အထုပ် ပြွန် Bobbin (0°) / Cone 4°20, 5°57, 9°15
ချည်ခင် တင်းမာမှု နှင့် လဆန်း စက်ကိရိယာ တိုင်း ဗိုင်းလိပ်တံ ရှိပါတယ် တစ်ဦး ကြိုး တင်းမာမှု နှင့် လဆန်း စက်ကိရိယာ
အော်တို ရပ် စက်ကိရိယာ တစ်ခုချင်းစီကို ဗိုင်းလိပ်တံ install အော်တို ရပ် စက်ကိရိယာ
သန့်ရှင်းရေး စက်ကိရိယာ တိုင်း ဗိုင်းလိပ်တံ ရှိပါတယ် တစ်ဦး စက်နှင့်ဆိုင်သော ဓါး ကြိုး သန့်ရှင်းရေး
အီလက်ထရောနစ် ချည်ခင် သန့်ရှင်းရေး optional installed
လေ Splicer optional installed
မှုတ်တံ သန့်ရှင်းရေး optional installed
အလင်းရောင် စံနစ် optional installed
ရှုထောင့် L ကို 2230 x W က 1100&nx ကsp;x H ကို 1600 မီလီမီတာ
လွန်ခဲ့သော : မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖျ groove စည်ချည်ခင် Cone Winder / အကွေ့အကောက်များသောစက် / Bobbin Winder စက်
နောက်တစ်ခု : မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖျ Cone Winder / အကွေ့အကောက်များသောစက် / Bobbin Winder စက်